Lix kamid ah doorashada kuraasta Golaha shacabka oo lagu qabanayo Kismaayo | Warbaahinta Ayaamaha
Lix kamid ah doorashada kuraasta Golaha shacabka oo lagu qabanayo Kismaayo
Gudiga doorashada Gobolada Waqooyi ee Somaliland
KISMAAYO-AYAAMAHA-Waxaa magaalada Kismaayo maanta lagu dooranayaa lix kursi oo ka mid ah kuraasta Golaha Shacabka oo deegaan doorashadoodu tahay magaalada Kismaayo.
Lixdan kursi ayaa waxaa ku tartami doona illaa 12 musharax oo aan ka mid ahayn xildhibaanadii hore ugu fadhiyay iyadoo xildhibaanadii afartii sano ee la soo dhaafay ku fadhiday kuraastan la sheegay in laga reebay.
Kuraastan ayaa waxaa ka mid ah;
Hop114 Waxaa ku tartami doona doona Cumar Ibraahim Xaashi iyo Cabdi Aadan Cabdullaahi,hase yeeshee waxaa kursigan hore ugu fadhiyay Cabdulqaadir Maxamed Cismaan oo laga reebay inuu tartamo.
Waxaa ka socda maamul goboleedyada doorashada golaha shacabka iyadoo shalay lagu doortay shan xildhibaan magaalada Garowe sidoo kalana la shaaciyay in maalmaha soo socda magaalada Muqdisho iyo Baydhabo ay ka dhici doonaan doorasho.
Hase yeeshee illaa iyo hadda ma jiro wax doorasho golaha shacabka ah oo ka dhacay dowlad goboleedka Hirshabelle balse waxaa dhawaan la shaaciyay illaa 11 kursi oo dhawaan doorashadooda ka dhici doonta magaalada Jowhar.